Makedonia: Tsy Misy Mpanao Gazety Any Am-ponja Intsony, 15 Volana Aty Aoriana, Afaka i Zoran Božinovski Rehefa Nandoa Onitra · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 04 Aogositra 2017 3:31 GMT
Zoran Božinovski nandao ny fonja, 15 Jolay 2017. Sary an'ny Fikambanan'ny Mpanao Gazety ao Makedonia, nahazoana alàlana.
Ny 17 Jolay, nofaranan'ny Fitsaràna momba ny Heloka Bevava ao Skopje ny 15 volana nitazonany an'ilay mpanao gazety, Zoran Božinovski, izay niatrika fiampangàna ho mpikambana anaty fikambanana mpanao heloka bevava sy resaka fitsikilovana ary fandrahonana.
Fangatahana nataon'ny Biraon'ny Fampanoavana no namotsorana an'i Božinovski .
Mitantana tranonkala iray mpanadihady ity mpanao gazety ity, ny Burevesnik.org izay nanaporitsaka vaovao mahavoarohirohy taminà kolikoly ireo Makedoniana politisiana.
Tamin'ny 2012, nahatezitra mafy ireo manampahefana izy rehefa tafiditra tao anatin'ireo 18 voampanga taminà raharaha iray antsoina hoe “Spy – Mpitsikilo”, izay niampangàna andian'olona — nahitàna mpiasa taloha tamin'ny sehatry ny fitsikilovana ary manamboninahitra tao amin'ny polisy, ny tale fahiny tao amin'ny Birao Miady Amin'ny Famotsiambola, ary ny filoha fahiny tao amin'ny kabinetran'ny filohan'ny antenimiera — ho niasa nanao asa fitsikilovana ho an'i Gresy sy Hongria.
Ny taona 2013, voasambotra tany Serbia i Božinovski, toerana nitadiavany fialokalofana politika, ary ny Aprily 2016 izy no naverina nody tany Makedonia.
Nitolona mafy ny Fikambanan'ny Mpanoa Gazety ao Makedonia (AJM) mba hahazoana antoka ny famotsorana ireo mpanangona vaovao voafonja tao Makedonia, ahitàna ireo tranga diso hafa fantatry ny maro amin'ny “raharaham-pitsaràna manavakavaka”, toy ny an'i Tomislav Kežarovski, izay nohelohina hifonja 4 taona sy tapany tamin'ny 2013, noho ny lahatsoratra iray tamin'ny 2008 izay namborahany ireo kileman'ny fanadihadiana nataon'ny governemanta momba ny fahafatesan'ny mpanao gazety iray hafa, Nikola Mladenov. Nigadra roa taona sy tapany izy ary tsy fahazoana mivoaka ny tranony mandram-panomen'ny Fitsaràna Mpandrava Didy fampihenana ny sazy nomena azy.
Nangatahan'ny AJM ny hamotsorana ihany koa an'i Božinovski, tamin'ny alàlan'ireo antso ampahibemaso tsy nitsahatra. Efa taona roa talohan'izao no navotsotra ireo olona hafa noahiahiana tamin'io raharaha io ihany, raha ilay raharaha kosa nampirimina dia naverina natomboka indray avy eo.
Nolazain'ireo mpanohana an'i Božinovski fa ny raharaha nanjo azy dia valifaty ho an'ny Burevesnik.org sy ny fitsabatsabahany amin'ireo Makedoniana mpitarika politika.
Taorian'ny 15 Jolay namotsorana an'i Božinovski avy any am-ponja, namoaka fanombaràna iray ny AJM nanamarihany fa ny fitazonana natao an'i Božinovski dia mametraka an'i Makedonia ho hany firenena ao amin'ny faritra Balkàna ahitàna mpanao gazety any am-badiky ny karakara vy. “Ny fitazonana mpanao gazety any am-ponja efa ho taona telo mahery dia tena tsy fandre any amin'ireo firenena malalaka sy demaokratika,” hoy ny vakin'ilay fanambaràna.
“Ny namotsorana an'i Bozinovski dia nanàla an'i Makedonia tsy ho anatin'ireo andianà firenena mpanao tsy refesi-mandidy ao Eoropa , izay ahitàna an'i Tiorkia, Rosia ary Azerbaijàna, izay anenjehana tsy misy farany ireo mpanao gazety,” hoy ny filohan'ny AJM, Naser Selmanin.
Lazain'ireo mpanakiana ny governemanta teo aloha tao Makedonina, izay nifehy hatramin'ny May 2017, fa ilay raharaha “Spy” manontolo dia noforomporonina ho amin'ny tanjona politika anatiny sy fanenjehana feno fanavakavahana atao amin'ireo olontsotra kinendrin'ny fitondràna. Tsy misy firaketana azon'ny daholobe jerena momba izay tarehimarika avy amin'ny govenemanta teo aloha ka niampangàny ireo mpikambana ao amin'ny Fiombonambe Eoropeana, Hongria sy Gresy, ho nanao asa fitsikilovana manohintohina an'i Makedonia.
Ny governemanta teo aloha aza, notarihan'ny antoko VMRO-DPMNE, nidehaka ho manana fifamatorana akaiky amin'i Viktor Orban, praiminisitr'i Hongria, ary nanome azy mariboninahitra fankasitrahana, volana vitsy monja taorian'ny nanokafany ilay raharaha “Spy”.
Ao anatin'ny Tondro Momba ny Fahalalahan'ny Asa Fanaovana Gazety, tatitry avy amin'ny RSF, nidina any amin'ny laharana faha-123 i Makedonia raha faha-34 taloha, tato anatin'ny dimy taona monja. Tabilao maneho ny laharana nisy ny firenena sy ny salanisa amin'ny fandaharana ny faritra Balkàna Andrefana (WB) nomen'ny Metamorphosis, nampiasàna ny angondrakitry ny RSF, avy ao amin'ny Internet Freedom Network.
Fitontonganan'ny demaokrasia tsy misy toa azy no niainan'i Makedonia tato anatin'ny taompolo farany, noho ny fambaboana fanjakàna nataon'ny antoko eo amin'ny fitondrana. Nahazo kiana avy amin'ireo fikambanana iraisampirenena miaro zon'olombelona izy, isan'ireny ny Solontenan'ny OSCE ho an'ny Fahalalahan'ny Media, noho ny fampiasàny ny fitsaràna ho fampanginana ireo media tsy miankina.
Nampanantena ny hanova izany fomba fanao tsy mety izany ny governemanta vaovao ka hitondra ny firenena hiverina amin'ny làlan'ny fitsofohana indray ho ao anatin'ny Eoropa amin'ny alàlan'ireo fanavoazana ankapobeny izay ho eo ambany fanarahamason'ny Fiombonambe Eoropeana. Saingy ireo vato misakana ara-pitantanana, ny fahabangàna amin'ny lafiny lalàna ary ny fanohanana tsy misy fepetra ny governemanta teo aloha hita any anatin'ireo andrim-panjakana no mbola hahatonga azy io ho làlan-davitra.